कुशुम क्षेत्री - कान्तिपुर समाचार
कुशुम क्षेत्रीका लेखहरु :
कसले पुछिदेला आँसु !
हरेक शनिबारझैं त्यो दिन पनि म ढिलो उठें । भान्छाको काम सकें । महामारीले फुर्सदिलो र एक्लो बनाएकी म, अलिकति लेख्ने काम सकेपछि फेसबुकको भित्तातिर हेर्न थालें । एकपछि अर्को श्रद्धाञ्जलीका तस्बिर थिए भित्तैभरि ! मनै कुँडियो, आफ्नै साथीका श्रीमान्को तस्बिर पनि त्यहीँ देख्दा ।